၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) မိန်းကလေးတစ်ဦးဟာ အဘွားဆီက လှပတဲ့ ဥယျာဉ်ခြံမြေကိုအမွေရလိုက်ပါတယ်။ မိန်းကလေးက သစ်ပင်ပန်းမန်စိုက်ပျိုးရတာကို သဘောကျ နှစ်ခြိုက်ပြီး သူ့ဥယျာဉ်လေးအတွက် အလွန်ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်သူပါ။ တစ်နေ့ကတော့ ကတ်တလောက်ထဲမှာ အလွန်လှပတဲ့သစ်ပင်လေးတစ်ပင်ကို မိန်းကလေးမြင်ပြီး သူ့ဥယျာဉ်ခြံမြေမှာစိုက်ပျိုးချင်စိတ် ပြင်းပြနေပါသတဲ့။ အဲဒီသစ်ပင်ကို မှာယူပြီး...
ကျန်းမာရေးအတွက် မိတ်ဆွေကောင်းလိုအပ်ရသည့် အကြောင်းရင်း
၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊ လူမှုရေးကောင်းမွန်တဲ့ ဘဝဟာ သင့်ကျန်းမာရေးကို ကောင်းမွန်စေတယ်ဆိုတာ သင်သိပါရဲ့လား။ ကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့ လေ့လာမှုတစ်ရပ်အရ ရင်းနှီးချစ်ခင်တဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးရှိတာဟာ အသက်ရှည်ရှည်နေရစေကြောင်း သိရပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ ကောင်းတဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကြောင့် ရောဂါကင်းစေပြီး စိတ်ဓာတ်ကျရောဂါကို ကင်းဝေးစေကာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့အလေ့အထတွေကို တည်ဆောက်နိုင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။...
အသက်ရှည်ကြောင်း နည်းကောင်း သုံးရပ်
ငွေကြယ်စင်ယံ နည်းလမ်းကောင်း (၁) အကောင်းမြင်သော စိတ်ကို ထားရှိခြင်း နယူးယော့ခ်ရှိ အိုင်းစတိုင်းဆေးကျောင်းမှ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက အသက်ရာကျော်ရှည်သူ ၂၄၃ဦးကို လေ့လာခဲ့ရာ အများစုဟာ အကောင်းမြင်စိတ်ရှိပြီး ဘဝကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖြတ်သန်းကာ ပျော်စရာသဘောထားတတ်တယ်လို့ တွေ့ရှိရပါတယ်။ ဘဝမှာအရာရာကို အကောင်းမြင်ပြီး မကြာခဏပြုံးပျော်ရယ်မောတတ်သူတွေက အသက်ရှည်တတ်ပါတယ်။...
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) အထီးကျန်နေရှာတဲ့ ဆင်တစ်ကောင်က တောထဲကို မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေရှာဖို့ ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ မျောက်တစ်ကောင်ကိုတွေ့တာနဲ့ ပျော်ပျော်ကြီး မေးလိုက်တယ်။ “မင်း . .ငါ့ မိတ်ဆွေဖြစ်နိုင်မလား အသင်မျောက်” မျောက်က ဖြေတယ်။ “မင်းက အကောင်ကြီးလွန်းတယ်။ ငါ့လိုမျိုး...
အငြင်းပွားမှုတိုင်း အနိုင်ရအောင် ဘယ်လိုလုပ်သင့်သလဲ . . .
ကိုထက် အနိုင်ရဖို့ မကြိုးစားသင့် တစ်စုံတစ်ယောက်က သူ့စိတ်ကူးအကြံဉာဏ် ကို ပြောပြချိန်မှာ ဘာကိုမှ လက်မခံဘဲ တိုက်ခိုက်ဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့။ သူပြောတဲ့အကြံကို လိုက်နာဖို့ သင့်ရဲ့လား၊ ဘာအားသာချက် ရှိသလဲ၊ ဘာအားနည်းချက်ရှိသလဲဆိုတာကို ဆန်းစစ်သင့်ပါတယ်။ သူ့အမြင်ကို လေးစားပါ အများနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ မတူတဲ့...
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) နွားလေးကောင်က တောတစ်ခုထဲမှာ နေကြတယ်။ သူတို့က သူငယ်ချင်းကောင်းတွေ ဖြစ်ကြပြီး အမြဲတမ်းအတူသွား၊ အတူစား၊ အတူနေထိုင်ကြတယ်။ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် စောင့်ကြည့်ပြီး စောင့်ရှောက်တာကြောင့် ခြင်္သေ့၊ ကျား စတဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေက သူတို့ကို...
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) တစ်နေ့မှာ သန်မာပြီး အစွမ်းရှိတဲ့ ခွေးတစ်ကောင်က ယုန်တစ်ကောင်နောက်ကို လိုက်နေပါတယ်။ အကြာကြီးပြေးပြီးနောက် မောပန်းနွမ်းနယ် လာတဲ့ ခွေးက အမဲလိုက်တာကို စွန့်လွှတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်ကို စောင့်ကြည့်နေတဲ့ ဆိတ်အုပ်စုက ယုန်ကလေးဟာ ခွေးထက်ပိုတော် ပါလားလို့...
ဆရာဆိုသည်မှာ . . .
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ကောလိပ်ပါမောက္ခတစ်ဦးက သူရဲ့ လူမှုဗေဒပညာရပ်အတွက် လူငယ်ကောင်လေး ၂၀ဝ ဦးရဲ့ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်တွေကို ကောက်ယူဖို့ ဘယ်လ်တီမိုးရှိ ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်နေသူတွေဆီသွားခဲ့ပါတယ်။ လူငယ်လေးတွေရဲ့ အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ မျှော်မှန်းချက်ကိုပါ မေးခဲ့တဲ့အခါ ကျောင်းသားတွေရဲ့ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်တိုင်းမှာ “သူ့မှာတိုးတက်ဖို့ အခွင့်အလမ်းမရှိဘူး”...
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) တစ်ခါတုန်းက သစ်ပင်ပေါ်မှာ ငှက်တစ်ကောင် အသိုက်ဆောက်နေစဉ် သစ်ပင်အောက်မှာ လိပ်တစ်ကောင် လာနားခိုပါသတဲ့။ လိပ်က ငှက်ကို မော့ကြည့်ပြီး ပြောလိုက်တာက – “ဘယ်လို အိမ်ဟောင်းကြီးလဲ၊ သစ်ကိုင်းအကျိုးအပဲ့တွေနဲ့ ဆောက်ထားတာ၊ အမိုးလည်း မရှိဘူး။...